तरकारी खेतीको बीमा गर्दा के छन् फाइदा ? - चौतारीपोष्ट अनलाईन
तरकारी खेतीको बीमा गर्दा के छन् फाइदा ?
कृषि पेसालाई पनि किन उच्चस्तरीय कार्यको रूपमा नराख्ने त रु कसरी आफूले गरेको काममा भई परी आउने क्षतिबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि खोज्नु जरुरी देखिन्छ । कुनै पनि व्यवसाय वा कुनै पनि काम आरम्भ गदा भावी दिनमा आउने जोखिमलाई पनि मध्यनजर गनिपर्दछ ।
बीमालेखले रक्षावरण गर्न जोखीमहरु :
बिशेष गरी तरकारी खेतीको बिमा गर्दा बीमकले बीमाको अवधि भित्र तरकारी खेतीको विवरण तालिकामा उल्लेख भए बमोजिमका तरकारी खेतीको क्षतीर हानी नोक्सानी भएमा लागत मूल्य अनुसारको क्षतीपूर्ती रकम सम्बन्धित पक्षलाई दिने गर्दछ । यदि कुनै पनि कारणबस तरकारी खेतीको बिमा अवधिभरी हानी नोक्सानी भएमा लागत मूल्यको अनुसारको क्षतीपूर्ति रकम भुक्तानी गर्न गर्दछ । बीमकले उक्त अनुसूचीमा उल्लिखित बीमाङक रकमको ९० प्रतिशत रकम बीमितलाई भुक्तानी गर्नछ ।
बिमा समितिले ०६९ साल देखि कृषि बिमा सुरु गरेको हो । समितिले निर्जीबन बीमाको व्यवसाय गर्दै आएका सबै बिमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेरै गाउँ–गाउँमा गएर कृषि बिमा गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । यसमा सरकार र बिमा समितिले मात्र नभई कृषक आफलै पनि यस्ता कुरामा बुझनु जरुरी देखिन्छ ।krishipatrika
Prevयी हुन् गर्मीमा उपयोगी ६ तरकारी
Next‘पर्यटन हब’ बन्दै झापा